Nhau - Snapped Filament
Chii Chine Nyaya?
Snapping inogona kuitika pakutanga kwekudhinda kana pakati.Ichakonzeresa kumira kwekudhinda, kusaprinda chinhu pakati-kudhinda kana zvimwewo nyaya.
∙ Yakare kana Yakachipa Filament
∙ Nozzle Yakazara
Yakare kana Yakachipa Filament
Kazhinji, filaments inogara kwenguva refu.Nekudaro, kana vakachengetwa mune zvisirizvo senge muchiedza chezuva chakananga, saka vanogona kuita brittle.Cheap filaments ane yakaderera kuchena kana kugadzirwa recycle zvinhu, kuitira kuti zvive nyore kubvutwa.Imwe nyaya ndeye kusaenderana kwefilament diameter.
Kana uchinge waona kuti filament yakabvutwa, unofanirwa kupisa muromo uye kubvisa filament, kuitira kuti iwe unogona kudyisa zvakare.Iwe unozofanirwa kubvisa chubhu yekudyisa zvakare kana iyo filament yakanyura mukati mechubhu.
EDZA IMWE FILAMENT
Kana kuputika kukaitika zvakare, shandisa imwe filament kutarisa kana tambo yakabvutwa yasakara kana kuti yakachipa inofanira kuraswa.
Kazhinji, pane tensioner mune extruder inopa kumanikidza kudyisa filament.Kana iyo tensioner yakanyanya kusimba, ipapo imwe filament inogona snap pasi pekumanikidza.Kana iyo itsva filament ikasvetuka, zvinodikanwa kutarisa kudzvanywa kwetensioner.
ARJUST EXTRUDER TENSION
Sunungura tensioner zvishoma uye ita shuwa kuti hapana kutsvedza kwefilament paunenge uchidyisa.
Nozzle yakajairirwa inogona kutungamira kune yakadamburwa filament, kunyanya yakare kana yakachipa filament iyo ine brittle.Tarisa kana muromo wakazara uye upe yakachena.
Enda kuNozzle Jammedchikamu kuti uwane rumwe ruzivo rwekugadzirisa dambudziko iri.
ONA TEMPERATURE UYE FLOW RATE
Tarisa kuti kana muromo uri kupisa uye kune tembiricha chaiyo.Tarisa zvakare kuti kuyerera kweiyo filament kuri pa100% uye kwete yakakwirira.
© Copyright 2022 : Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.Shenzhen TronHoo Intelligent Technology Co. Ltd. Featured Products Sitemap Uk 3d Printer Filament PLA filament Cylinder Laser Engraving Machine Filamente Pla Aquarium Safe 3d Printer Filament Pla Filament 1.75 Mm All Products>